သင်၏ iPhone ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
"ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ" သည်ကျန်းမာရေးအသုံးချပရိုဂရမ်၏မေ့လျော့မှုနှင့်အသုံးအနည်းဆုံးအပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ R ကိုဤအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသည်အရေးပေါ်အခြေအနေ၌သင့်အကြောင်းအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်သည်။ ဒီဒေတာကို iPhone ကိုမဖွင့်ဘဲမသုံးပဲရယူနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်သူကလိုအပ်တဲ့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။
ပထမဆုံးအချက်ကတော့ Health app ကိုသွားပြီးအဲ့ဒီထဲကတစ်ကြိမ်မှာညာဘက်အောက်ပိုင်းရှိ "Medical data" ကိုသွားပါ။ ထိပ်မှာ "တည်းဖြတ်" ကိုနှိပ်ပါ ငါတို့သည်ကဏ္sectionsများအတွက်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။
မင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ "သော့ခတ်တဲ့အခါကြည့်ပါ" ဖွင့်ထားသည်။ ၎င်းသည်မည်သူမဆိုသင်၏ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းတို့ထံဝင်ရောက်ရန်အရေးကြီးသည်။
12 iPhone ကိုသော့ခတ်ပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ
13 Apple Watch နဲ့ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
ဖြည့်ရမည့်ပထမအပိုင်းမှာနာမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လှည့်ကွက်တစ်ခုရှိသည်။ ငါတို့နာမည်ထည့်ရမယ်သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသားကျန်းမာရေးစနစ်ကဒ်တွင်သင်တွေ့နိုင်သည့်သင်၏ CIP သို့မဟုတ်လူနာဖော်ထုတ်ရေးကုဒ် (စကားလုံးကန့်သတ်ချက်မရှိသောကြောင့်) ထည့်ရန်အကြံပြုပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်စပိန်နိုင်ငံပြင်ပတွင်နေထိုင်ပါက၊ သင်၌ပုဂ္ဂလိကအာမခံသို့မဟုတ်အခြားဆေးဝါးကုသမှုခံစားခွင့်ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာ Affiliate အရေအတွက်ကိုထားပါ။ ၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုအမည်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မလုံလောက်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းကိုအမြဲတမ်းလက်ထဲမှာထားသင့်သည်။
ဒီမှာစာရင်းပြုစုရမယ် ငါတို့ခံရသောသူတို့ကိုရောဂါဗေဒ။ ဥပမာ - ပန်းနာခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ ဆီးချိုရောဂါစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ သို့မဟုတ်အရက်သို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်မျိုးမျိုးကိုစားသုံးခြင်းသည်ဆိုပါကထားသင့်သည်။
iPhone ကိုသော့ဖွင့်စရာမလိုပဲဒီအချက်အလက်တွေကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မယ် ငါတို့တင်ချင်သောအရာ၊.
Apple ၏ဥပမာမှာ "အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် Call Chloe" ဖြစ်သည်၊ မလိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် "သူမ၏နံပါတ်နှင့်အတူ" အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရန်အဆက်အသွယ်တွင်ပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်နိုင်သမျှအသုံး ၀ င်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုထားလိုပါက၎င်းသည်နေရာချလိမ့်မည် ကျနော်တို့ရှိခဲ့သောသူတို့အားရောဂါများနှင့်စစ်ဆင်ရေး။ ဥပမာအားဖြင့် "၈၇ တွင်ဘယ်ဘက်မျက်လုံးအတွင်းရှိမျက်စိအတွင်းတိမ်အတွက်လုပ်ဆောင်သည်" လေဖြတ်ခြင်း (သို့) နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောမိသားစုသမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အမြဲ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ်ခုနှင့်မတည့်ပါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရမည်။ Latex မှသည် penicillin အထိ၊ အဖြစ်အပျက်ကိုဖော်ပြသကဲ့သို့။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းသေချာသည့်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရပြီးသက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများကိုလုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်သည်းမခံနိုင်ခြင်း (သို့) သတ်သတ်မှတ်မှတ်အရာတစ်ခုခုဖြစ်သည်ကိုဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဓာတ်မတည့်ခြင်းမရှိလျှင်၎င်းကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတွင်မရှိကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရမည် "မသိသောဓာတ်မတည့်ခြင်း" ·
ကျွန်ုပ်တို့သောက်သုံးသည့်ဆေးဝါးနှင့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သောက်ကောင်းသောက်သုံးနိုင်သည့်ဆေးဝါးများပါ ၀ င်ရမည်။
ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါး, ဆေးထိုးနှင့်ပုံမှန်အတိုင်းပုံစံရေးပါလိမ့်မယ် ငါတို့မှာဘာရှိလဲ အချိန်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည် paracetamol သို့မဟုတ် ibuprofen ကိုယူလျှင်၊ "ကြိုကြားကြိုကြားအသုံးပြုခြင်း ... " ကိုထည့်နိုင်သည်။
သင်သိလျှင်ချရေးပါ။ မိုင်း A- ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်မသိလျှင်၊ သင် သွား၍ သွေးလှူဒါန်းနိုင်သည်၊ သူတို့သည်သင့်အားပြောပြလိမ့်မည်၊ ထို့အပြင်သင်လည်းလှူသည်။
ဒါဟာအလွန်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောမေးခွန်းဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်, ဒါကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးထားရန်အရေးကြီးပါသည်.
အချိန်ကုန်ခံပြီးကျွန်ုပ်တို့အလှူရှင်မဟုတ်လျှင် iPhone ထည့်ခြင်းသည်တရားဝင်မှုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်။ အရေးကြီးတာကဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီးမိသားစုကိုကြှနျုပျတို့၏ကွိုကျခကျြမြားကိုရှငျးပွရနျဖွစျသညျ။
ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုထက်ပိုသော (ကျွန်ုပ်တွင်သုံးခုရှိသည်) ထည့်နိုင်ပြီး၊ သူတို့၏နံပါတ်များနှင့်အမည်များကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည်အရေးအပါဆုံးကဏ္ one တစ်ခုဖြစ်သည် ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါထားရန်ငါတို့မျက်နှာသာအတွက်ထင်ပါတယ်။
အကယ်၍ iPhone သည်သော့ခတ်ထားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ချင်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone မဟုတ်ဟုယူဆရသည် Home ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ (သို့မဟုတ် iPhone X ကိုကြည့်ပါ။ ) ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ရှင်မဟုတ်သောကြောင့်ကုဒ်ဖြင့်သော့ဖွင့်ခြင်းမျက်နှာပြင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ခုန်ကျော်သွားလိမ့်မည်။ အဲဒီမှာ "SOS" ကိုနှိပ်ပါ။ “ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ” နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည့်နေရာတွင်အရေးပေါ်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
Apple Watch နဲ့ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ
ဒီမှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ဘေးထွက်ခလုတ်ကိုဆက်လက်စောင့်ရှောက်မည်နှင့် option ကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကြည့်ရှုရန်ပွတ်ဆွဲပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » သင့် iPhone ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း
Fortnite သည် ၅ ရက်အတွင်းဒေါ်လာ ၁.၅ သန်းရရှိသောဝင်ငွေကိုရရှိသည်